Inona no atao hoe fitia? | Ny valisoa fanonerana | Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Home fifandraisana Inona no atao hoe fitia?
Ny fitiavana, na ny fitiavana ny hafa na ny tiana, dia mahatonga antsika hahatsapa ho mifandray, azo antoka, feno, voakarakara, matoky, milamina, velona, ​​mamorona, manome hery ary manontolo. Nanentana poety, mpitendry zavamaneno, mpanakanto, mpanoratra ary teolojiana nandritra ny an'arivony taona maro izy io. Fa inona no atao hoe fitiavana? Ity misy mahafinaritra animé video izay mampiseho amintsika ny endriny amin'ny asa.
Izany no hery mampihetsi-po indrindra ao amintsika rehetra. Ny mifanohitra amin'izany dia ny tahotra, izay miseho amin'ny endriny maro toy ny fahatezerana, ny alahelo, ny fialonana, ny fahaketrahana, ny fanahiana ary ny toy izany.
Mba hahitana fitiavana bebe kokoa, dia manampy tokoa ny mahafantatra fa ny faniriana sy ny fitiavana ara-pananahana, amin'ny hevitry ny fatorana, dia novokarin'ny rafitra anankiroa, saingy mifandray amin'ny atidoha. Afaka mahatsapa fifandraisana amin'ny namana iray isika fa tsy maniry hanao firaisana ara-nofo ho azy. Afaka manao faniriana ara-nofo ho an'ny olona iray isika raha tsy mahatsiaro ho voafatotra. Ny fandanjalanjana ara-pahasalamana ny faniriana sy ny fatorana no fototra tsara indrindra amin'ny fifandraisana maharitra eo amin'ny lahy sy ny vavy. Samy valisoa voajanahary izy ireo.
Ny valisoa voajanahary na voalohany dia sakafo, rano, firaisana ara-nofo, fifandraisana feno fitiavana ary vaovao. Mamela antsika hivoaka sy hivoatra izy ireo. Ny fitadiavana ireo valisoa ireo dia vokatry ny faniriana na ny fiankinan-doha amin'ny alàlan'ny dopamine neurochemical. Ny valisoa natoraly dia manome antsika fahatsapana fahafinaretana rehefa mihinana, misotro, manamboatra, ary mikolokolo. Ny fahatsapana mahafinaritra toy izany dia manamafy ny fitondran-tena ka te hamerina izany. Ny fanaintainana amin'ny ankapobeny, indrindra raha maharitra, dia mamela antsika. Izany no fomba ianarantsika. Ny tsirairay amin'ireo fitondran-tena ireo dia takiana amin'ny fiverenan'ny karazana.
Ny pôrnôgrafia dia manararaotra ny faniriantsika amin'ny faniriana hanao firaisana ara-nofo, indrindra fa amin'ny zatovo, nefa tsy mametraka ny fatorana sy ny fitiavana. Ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet mandritra ny fe-potoana dia mety hitondra fahaketrahana ary na dia fiankinan-doha amin'ny olona sasany. Ny fianarana ny fomba itiavana amim-paharetana dia zava-dehibe ho an'ny fantsom-pahatokiantsika maharitra.
Ity misy torolalana maivana sy mora ahafantarana ny asan'ny neurochemicals lehibe indrindra mahatonga antsika hahatsapa fitiavana. Tsarovy ny voalohananao voalohany?
Fitiavana toy ny fatorana >>